02/02/2018 - Page 3 sur 4 -
Itaosy : Toeram-pivarotana mpanakanto nisy nandoro
02/02/2018 admintriatra 0
Ankoatra ny filalaovana sy ny famokarana sarimihetsika, dia manan-talenta amin’ny fitrandrahana lamaody ihany koa i Sahoby ao amin’ny trano mpamokatra Horizon. Efa taona vitsy no nananganany ny Sahobellemode. Nisy ny trano fampirantiana sady fivarotana izany …Tohiny
Soavina Betafo : Efatra mirahalahy maty nilatsaham-potaka
Hatramin’ny niandohan’ny fotoam-pahavaratra teto Vakinankaratra dia efa maherin’ny folo izao no olona efa maty nilatsaham-baratra. Isan’izany ity tranga niseho tao amin’ny kaominina Soavina Betafo ity ny alin’ny alarobia hifoha alakamisy lasa teo. Tao andoharano fokontany …Tohiny
Kidnapping : 16 andro no nitazoman’ny jiolahy an’i Khalidas
Feno enina ambin’ny folo andro anio no nitazoman’ireo jiolahy ny tompon’ny “bijouterie” khalidas etsy Andohan’Analakely. Mbola tsy nahazoam-baovao ny mahakasika ity karana mpandraharaha ity hatramin’izao. Araka ny loharanom-baovao kosa, dia fantatra fa efa nisy ny …Tohiny
Vonoan’olona tany Salafaina-Mahabo : Lehilahy iray efa hikoizana i Célin
Mitondra faisana tanteraka ny mponina ao amin’ny fokontany Ambodibonara, kaominina Mahabo distrikan’i Fenoarivo Atsinanana amin’ny vonoan’olona feno habibiana ataon’ity lehilahy iray antsoina hoe Célin ity. Miahiahy fatratra izy ireo araka izany, satria dia fantatra fa …Tohiny
Mitohy, ary efa tafapetraka ny fiaraha-miasan’i Madagasikara amin’ireo firenena vahiny sy ireo fikambanana iraisam-pirenena. Araka izany sy araka ny efa fantatra, dia mandray anjara amin’ny Fihaonamben’ny Unesco andiany faha-39 any Paris, Frantsa, i Madagasikara amin’ny ...Tohiny